कोरोना संक्रमणबाट उपमेयर चौधरीको मृत्यु — Sanchar Kendra
२सञ्चारकेन्द्रका समाचारहरु अव मेरो कुंडली एपमा पनि
३राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा फेरि पदमुक्त
४आज बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
५बालुवाटरमा प्रदर्शन गर्ने नागरिक अगुवामाथि धरपकड, नारायण वाग्ले रखगेन्द्र संग्रौलासहित १८ जना पक्राउ
६कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने रामदेवको घोषणा
७सभामुख सापकोटाले बोलाएको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली नजाने
८सर्वोच्चले आफ्नै परमाधेशविपरीत अन्तरिम आदेश दियो- मुख्यमन्त्री पोखरेल
९विश्वकप छनोटमा नेपालले आज अष्ट्रेलियाको सामना गर्दै
१०कोरोनाविरूद्धकाे १० करोड डोज खोप दिने बेलायतको घोषणा, क-कसले कहिले पाउछ ?
११कोरोनाबिरुद्ध लड्न बेलायतले गर्यो यस्तो घोषणा
१२देखिन थाल्यो कोरोनाको अर्को नयाँ लक्षण, यसो भन्छन विज्ञ
७कोरोना बिरुद्ध ललितपुरमा नेकपाको जनसहयोग एवं हातेमालो अभियान सुरु
८सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गरेको खण्डमा एमालेले स्वीकार्छ- नेता बोगटी
९समयमा नै दोस्रो डोज खोप नपाए के हुन्छ ? यसो भन्छ डब्ल्यूएचओ
सप्तरी । कोरोना संक्रमणबाट सप्तरीमा एकजना उपमेयरको मृत्यु भएको छ । कोरोना संक्रमित सप्तकोशी नगरपालिकाकी उपमेयर आशा चौधरीको उपचारका क्रममा मंगलबार बिहान विराटनगरस्थित नोबेल अस्पतालमा मृत्यु भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।
दुई हप्ताअघि ज्वरो, रुघाखोकी तथा स्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि एन्टिजेन परीक्षण गर्दा ४० वर्षीया उपमेयरमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । गर्भवती समेत रहेकी उनलाई थप असहज भएपछि फत्तेपुर मोडल पोलिक्लिनिकमा सामान्य उपचारपछि विराटनगर लगिएको थियो ।
त्यहाँ १० दिनअघि अस्पताल भर्ना भएकी उनको आईसियुमा राखेर उपचार भइरहेको थियो । उनको गर्भबाट यसअघि नै मृत बच्चा निकालिएको थियो । थप असहज भएपछि भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको क्रममा उनको मृत्यु भएको हो । मृतक उपमेयरका चौधरीका श्रीमान् र ७ वर्षका एक छोरा छन् ।
यसैगरी सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिका–४ का ४५ वर्षीय कोरोना संक्रमित पुरुषको मंगलबार बिहान तीन बजे मृत्यु भएको छ । तीन दिनअघि राजविराजस्थित छिन्नमस्ता हस्पिटलमा उपचारका लागि भर्ना भएका ती पुरुषको सोही अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ । यसअघि सोमबार सप्तरीको गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा पाँच जनाको र छिन्नमस्ता अस्पतालमा दुई जनाको मृत्यु भएको थियो ।
यस्तै उता लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत चारजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । चार जनामध्ये तीनजना रुपन्देहीका र एकजना अर्घाखांचीका हुन् ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका अनुसार वैशाख २८ गते भर्ना भएका सियारी–३ रुपन्देहीका २९ वर्षिय पुरुषको बुटवल धागो कारखानाको आईसीयूमा सोमबार साँझ ७ः२७ बजे मृत्यु भएको हो ।
यस्तै, जेठ २ गते भर्ना भएका खनदह अर्घाखाँचीका ४३ वर्षीय पुरुषको पनि धागो कारखानाको आईसीयूमै राति १२ः०४ बजे मृत्यु भएको अस्पतालका प्रवक्ता डा. विष्णु गौतमले जानकारी दिए ।
यस्तै, जेठ २ गते भर्ना भएका तिलोत्तमा २ रुपन्देहीका ७९ वर्षिय पुरुषको सोमबार साँझ ५ बजे प्रादेशिक अस्पतालको इमर्जेन्सीमा र बुटवल–१२ का ४० वर्षिय पुरुषको सोमबार साँझ ६ बजे अस्पताल पुर्‍याएलगत्तै मृत्यु भएको डा. गौतमले बताए । योसँगै रुपन्देहीमा कोरोना संक्रमितको मृत्यु हुने संख्या २६५ पुगेको छ ।
यस्तै उता दुल्लु नगरपालिका–१२ गौरीमा कोरोनाबाट एउटै समुदायका नौ जनाको मृत्यु भएको छ । वडामा कोरोना सङ्क्रमणबाट यति धेरैको मृत्यु भएको दैलेखमा पहिलो हो ।
मृतक छ जनामा कोरोना परीक्षण गरिएको थियो भने अन्य तीन जना छिमेकीमा ज्वरो आउने, शरीर, छाती दुख्ने र रुघाखोकी आउने लक्षणसहित मृत्यु भएको स्वास्थ्यचौकी गौरीका संयोजक रमेश लम्सालले बताए।
उनीहरुको परीक्षणबिनै बिरामी भएको पाँचदेखि आठ दिनमा मृत्यु भएको लम्सालले बताए । अन्य छमध्ये दुई जनाको भारतमा मृत्यु भएको थियो । बाँकी चार जनाको सुर्खेत र दैलेखमै उपचारका क्रममा मृत्यु भएको स्वास्थ्य संयोजक लम्सालले बताए ।
यहाँ कामका लागि भारत गएका स्थानीयवासी घर फर्केसँगै १५ दिनभित्र नौ जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको हो । एउटै समुदायभित्र नौ जनाको मृत्यु भएपछि अहिले अवस्था असामान्य बनेको छ । दुल्लु–१२ को एउटै टोलमा १०० भन्दा बढी बिरामी रहेको खबर पाएपछि उपचारका लागि चिकित्सकसहितको टोली लिएर परीक्षणका लागि पुगेको दुल्लु नगरपालिका प्रमुख घनश्याम भण्डारीले बताए ।
“रातदिन नभनी स्वास्थ्यकर्मी लिएर गाउँगाउँमा गएका छौँ । अधिकांशमा ज्वरो र रुघाखोकी रहेको छ”, भण्डारी बताए । औषधिसहित पुगेको स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले परीक्षणलाई तीव्र पारेको छ ।
बालुवाटरमा प्रदर्शन गर्ने नागरिक अगुवामाथि धरपकड, नारायण वाग्ले रखगेन्द्र संग्रौलासहित १८ जना पक्राउ
विश्वकप छनोटमा नेपालले आज अष्ट्रेलियाको सामना गर्दै